Waa maxay shil gaari ku adag?
A shil gaari ku adag yahay marka drive adag shaqada joojin, waxaa buriyay awoodin fulinta hawlaha ay sida caadiga ah halka laga badiyay dhammaan xogta ku yaal. Drive A adag burburi karaan ay sabab u tahay tiro balaadhan oo ah sababo. Kuwani sababo la qiyaas ahaan tilmaami karo in noocyada soo socda:
Ka gaabinta Physical
Drive A adag heli jir ahaan waxyeelayn kara kulaylka, qoyaanka ama shoogga. Kuwan oo dhan waxay sababi karaan dhaawac halis ah drive adag taasoo keentay in ay ku fashilmaan. Inta jeer ee, kari haadiyey si ay u bixiyaan qaboojinta ku filan oo ay drive adag baqdin nijaasta u ururay in ay filter sababa dhaawac kulaylka in drive adag. Daadaan Water ku saabsan burburka sabab Cam drive adag ay sabab u tahay qoyaanka halka tagtey ee laptop waxyeello u keeni karaa in si lama filaan ah drive ka adag.
Failure macquul ah waa software la xiriira oo uusan haysan wax ay sameeyaan kuwa dhaawaca jirka. dhaawaca Logical waxaa keeni kara fayrasyo, files kharribeen iyo baadi aadanaha. Imaanshaha ee shaashadda caanka ah buluug dhimashadu waa calaamad cad oo burbur macquul ah in drive adag.
Drive The adag ku jira qaar ka mid ah qaybaha farsamo sida disc iyo madaxa akhri-qor. Iyadoo mar, kuwaas oo ka kooban farsamo aad ka sii dartay oo ay ku guuldareysato sababaya shilalka gaari ku adag. Dhawaaqyo gujinaya ka disk adag tahay calaamad cad oo ah dhaawac.
Sidee u sheegto haddii shil gaari ku adag tahay shil gaari ku adag jireed ama shil macquul adag drive?
Dhaawac jirka ah oo macquul ah in la kala karaa iyada oo ku saleysan calaamadaha keeni kasta. Xaaladdan oo ah drive jirka adag shil ka badan kululaynta haddii drive adag waa calaamad cad oo dhaawac jirka. Haddii kale, haddii drive adag istaago ugu dhaqsaha badan ka shaqeeya ka dib markii ay heleen lama filaan ah ama noqotay in aan maro ku daadaan biyo ah, waxa ay tahay mid amaan ah oo u sheegay in fashilka ahaa jirka. Shil gaari ku adag macquul ah ka hor inta dhab ahaan dhacaya, bandhigaysaa calaamado sida waxqabadka nidaamka gaabis ah, khasaaraha lama filaan ah khaladaadka xogta iyo disk.
Maxaa la sameeyaa markii shil jirka adag drive dhacdaa
Isku day in aad dib u soo ceshano xogta iyo iyaga gurmad meel kale
Haddii wadid aad u adag weli waa ay awoodaan in ay taageeraan hawlaha aad laptop ama computer, xitaa waqti xaddidan, isku day in aad soo kabsaday xogta si drive dibadda adag isticmaalaya software ah soo kabashada xogta sida Wondershare Data Recovery . Wondershare Data Recovery Waa u fududahay ah in la isticmaalo software wax kaqabashada xogta kuu oggolaanaysa in aad soo kabsado file tirtiray baqdin shilalka disk, si aad u fudud. Waxa ay taageertaa tiro balaadhan oo ah nooc file oo uu leeyahay laba qaabab kala duwan si aad u oggolaatid baaritaan raajo-ku ool ah sida looga baahan yahay user ee.
Hubi drive adag haddii ay tahay ayaa weli loo isticmaalo
Qaado wadid aad u adag in garaash computer ah ha khubaro farsamo waxaa loo ogaado haddii ay weli waxaa loo isticmaali karaa ka dib markii qaar ka mid ah dayactirka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad adigu aad leedahay aqoon farsamo oo qaar ka mid ah, aad go'aan ka gaari kara xaalada iyo go'aan ka gaarno haddii aad rabto in aad haysato ama tuur.
U dir dayactirayo ama lagu badalayo wadid aad u adag
Haddii drive adag u geysto, laakiin weli waa la kabi karayn, u soo dir garaash computer ah si loo qaadi karo daryeelka. Haddii si kastaba ha ahaatee, aad ayaa la micno ah in la gaarsiiyo si aad u wadato cusub adag in muddo ah hadda, aad ka fursaddan qaadan kartaa gunnada iyo naftaada aad u hesho baabuur cusub oo adag.
Maxaa la sameeyaa markii shil macquul adag drive dhacdaa
Isku day inuu ka soo kabsado xogta in qalab kale
Waxa ugu horeeya ee ah in aad isku daydo in aad samayso waa soo kabsado xogta in la joogo ku wadid aad u adag sidii adkaan kartaa in la soo ceshano mar xaalad ka mid ah drive ka adag oo ka sii darta. Isticmaalka Wondershare Data Recovery waxaa la samayn karaa in arrintan la xiriira.
Isku day inaad qaab Risaalo
Qaar ka mid ah khaladaadka macquul ah in la xallin karin sameeyo qaab sahlan oo ah drive ka adag oo markaas qabanayaan rakibo nadiif ah nidaamka qalliinka. Iyadoo trick tan shaqeeya khaladaad macquul fudud, heer sare ah u baahan tahay waxaa laga yaabaa in dadaal in yar oo dheeraad ah oo ku takhalusaya.
Maxaa la sameeyaa si looga fogaado ama badbaadaan shil gaari ku adag
Is ogow fiican ee aad nidaamka. Iska ilaali keeno eatables gaar ahaan cabitaanno ah waxay u dhow dahay. Haddii aad qabto faraha subag aad u hesho kiiska ka hortag loogu talagalay laptop aad si looga fogaado nidaamka ka helaya naxdintii toos ah.
Had iyo jeer ka fiiriyaana calaamado in laga yaabaa in lagu oo muujinaysa in ay wax qaldan la wadid aad u adag. Tixgeliyaan kulayl aad nidaamka iyo wax sanqadh soo socda ka drive adag. Sida ugu dhakhsaha badan aad isku aragto ama calaamado kale oo la mid ah, la xiriir soo saaraha drive adag si aad u hesho waxa bedelay ama inuu u cusboonaysiiyey.
Samee hayaan joogto ah oo xog si ay dhacdo in shil gaari ku adag ama ay dhacdo la mid ah, ugu yaraan waxaad heli kartaa dhammaan xogta aad ammaan iyo kalsooni.
> Resource > Hard Drive > Maxaad samayn lahayd in shil gaari ku adag?